Talyaaniga oo Badda Mediterranean-ka kasoo saaraya 800 Oo Tahriibayaal ku harqamay Badda | Hordhac News
Talyaaniga oo Badda Mediterranean-ka kasoo saaraya 800 Oo Tahriibayaal ku harqamay Badda
By Hordhac on April 19, 2016 No Comment
Ciidamadda Badda Talyaaniga ayaa sheegay in ay badda Mediterranean-ka kasoo haleyn mayded la rumeysan yahay in ay dooni la qalibmatay, inkastoo ciidamadda aysan sheegin maydadka la helay jinsiyadahooda iyo halka ay kasoo baxeyn.
Laakiin warbixin hordhac ah ay soo saareyn ciidamadda Badda Talyaaniga ayeey ku sheegeyn in ay cabsi xoogan ka qabaan dad kor u dhaafaya 800 oo dadka tahriibta ah ay ku jiraan salka hoose ee Badda, Sidaasi oo kale waxay ciidamda cadeeyeen in maydadkaasi aysan aheyn kuwa dhawaantaani ku harqamay badda ee ay doonidda la dagday April 18-19 ee sanadkii 2015-kii, kuwaasi oo ehalada iyo qaraabada dad la lasan yahay codsadeyn in la baaro.
Ciidamadda ayaa sidaasi oo kale sheegay in ay waqti badan qaadatay soo daad gureynta meydadkaasi mudada sanadka ah ku jira badda Mediterranean-ka iyaga oo ku macneeyay in dhibaato xoogan ay ku qabsato mar walibaa bartamaha badda taasi oo ah jiwiga badda oo aad u daran.
Ra’iisul Wasaaraha Dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa waxaa uu warbaahinta u sheegay in baaritaanadaasi ay qaadan doonto mudo aad u yar, isla markaana uu amar ku bixiyay in la helo jinsiyadaha meydadkaasi ay badda liqday.
Si walibaa ha ahaatee dhawaan ayeey aheyd markii dooni siday dad aad u tiro badan oo ay Soomaali ku jirtay ku dagday Badaha u dhaxeeya Masar iyo Liibiya, doonida ayaa ku sii jeeday dhankaasi talyaaniga inkastoo ay ku harqameyn bartamaha badweynta Mediterranean-ka.
Ugudanbeyntii ciidamadda talyaaniga ayaa sheegay in doonidaasi badda ku dagday sanadkii 2015-kii laga soo badbaadiyay 29 qof isla markaana doonidii lagu soo xiray dekadda Augusta ee Sicily, iyadoo durbaba lagula dhaqaaqay in laga helo aqoonsiyada dadkaasi la rumeysan yahay in ay ku sugan yihiin gunta hoose ee badda Mediterranean-ka.
(Visited 170 times, 1 Soo booqatay Maanta)
Talyaaniga oo Badda Mediterranean-ka kasoo saaraya 800 Oo Tahriibayaal ku harqamay Badda added by Hordhac on April 19, 2016